5 သောက်ပြီးတော့ဥရောပမှာတော့ကြိုးစားပါရန်အကောင်းဆုံးဒေသခံအချိုရည် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5သောက်ပြီးတော့ဥရောပမှာတော့ကြိုးစားပါရန်အကောင်းဆုံးဒေသခံအချိုရည်
ဥရောပအများအပြား၏အံ့သြဖွယ်အစည်းအဝေးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများ - နှင့် အချက်အပြုတ်အစဉ်အလာ. သောလူမြိုး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကွဲပြားဝိသေသလက္ခဏာရှိပါတယ်, အရာကကမ်းလှမ်းညာဘက်င်း၏သမိုင်းနှင့်အခြားအရာအားလုံးထဲသို့ဧည့်သည်များဆွဲယူ. ထိုအခါအချို့နိုင်ငံများရှိ, ကြောင်းကိုလည်းအရသာအချိုရည်ကိုဆိုလိုသည်!
သင့်ရဲ့အာခေါင် excite နှင့်အချို့သောဒေသခံများအတည်ပြုပျော်စရာရှိသည်ဖို့ခရီးသွားလာသူများကဤနိုင်ငံများကလာရောက်လည်ပတ်ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်. ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းရှိပါတယ်5မသောက်ရနှင့်ဥရောပထဲမှာကြိုးစားရန်အကောင်းဆုံးဒေသခံအချိုရည်:
1. အီတလီမှာအကောင်းဆုံးဒေသခံအချိုရည်: Limoncello
Limoncello သင်ဤတလွှားအားလုံးကိုရှာဖွေနိုင်မယ့်အံ့သြစရာအီတလီတီထွင်မှုဖြစ်ပါသည် လှပသောတိုင်းပြည်. သို့သျောလညျး, သငျသညျက၎င်း၏အကောင်းဆုံးမှာဒီအလင်းသံပုရာအရက်များကြိုးစားရန်ဆန္ဒရှိလျှင်, Amalfi မှဦးခေါင်း. အဲဒီမှာ, လှပတဲ့အပေါ် Amalfi ကမ်းခြေ, သူတို့အီတလီနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့အတွက်အကောင်းဆုံးသံပုရာထံမှ limoncello အောင်. မူရင်းစာရွက်သာအနည်းငယ်ချိုမြိန်ကြောင်းတစ်ခုမွှေးကြိုင်လင်မနစ်နဲ့တူဒီသောက်အရသာစေသည်. သို့သျောလညျး, တဖြည်းဖြည်းနှင့်ဂရုတစိုက်ပြုလုပ် SIP, ၎င်း၏အစွမ်းသတ္တိကိုအံ့သြစရာအားဖြင့်သင်တို့ကိုယူနိုငျသောကွောငျ့.
Salerno ရထားမှ Naples
2. ဘော်ဒိုးအကောင်းဆုံးဒေသခံဝိုင် - ပြင်သစ်
တစ်ဦးသည်စပျစ်ရည်ကိုနှစ်သက်များအတွက်, ဥရောပတိုက်တွင်ကြိုးစားကြဖို့အကောင်းဆုံးဒေသခံအချိုရည်၏တဦးတည်းဆက်ဆက်တစ်ဘော်ဒိုးစပျစ်ရည်ကိုပါလိမ့်မယ်. ကနာမည်ကြီးပြင်သစ်တင်ပို့သော်လည်း, ဒါဟာဆက်ဆက်ဘော်ဒိုး၌ဤလက်ရာမြောက်သောစပျစ်ရည်ကိုစဉ်ကိုအမြည်းအနေနဲ့အတွေ့အကြုံ. တစ်ဦးကစပျစ်ရည်ကိုခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ် စူးစမ်းလေ့လာမယ့်ပြီးပြည့်စုံသောလမ်း ဒေသတွင်းနှင့်၎င်း၏ဝိုင်. ပိုကဘာလဲ, သငျသညျစပျစ်ရည်ကိုအောင်အကြောင်းအများကြီးသင်ယူပါလိမ့်မယ်, အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ chateaus, နှင့် microclimates.
3. Pimms ဖလား - အင်္ဂလန်
သငျသညျလန်ဒန်မြို့တွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့ပါလျှင် နွေရာသီကာလအတွင်း, သငျသညျရိုးရှင်းစွာနမူနာမရှိဘဲစွန့်ခွာလို့မရဘူး Pimms ဖလား. ဒါဟာနှစ်လယ်ပိုင်းတွင် 1800 ခုနှစ်တွင်သွန်းလောင်းကိုတီထွင်တဲ့သူဂျိမ်းစ် Pimm ခဲ့သည်, သူသောသူသည်မိမိနာမအငှါးတဲ့ကြီးမားတဲ့ဖလား၌ကတာဝန်ထမ်းဆောင်. ဒါဟာ fizzy လင်မနစ်နှင့် Pimms အဘယ်သူမျှမပေါင်းစပ်တဲ့လန်းဆန်းသောက်ဖြစ်ပါသည်. 1, အဖြစ်အသီးအချပ်များနှင့်ပူစီနံ sprig. လုံးဝအရသာ, နှင့်ဥယျာဉ် setting ကိုတစ်ဦးအပျော့စားနွေရာသီနေ့၌ခံစားဘို့ပြီးပြည့်စုံသော, Pimms ဖလားအလိုတော် ကျက်သရေသငျသညျ.
4. ဂျာမနီမှာတော့အကောင်းဆုံးဒေသခံအချိုရည်: schnapps
ဂျာမနီမှာ, Schnaps အရသာအမျိုးမျိုးရှိနိုငျသောခိုင်ခံ့သောအရက်သောက်များအတွက်ထီးအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်. ဥပမာ, သင်တစ်ဦး fruity Schnaps တစ်ခုသို့မဟုတ်မြက်ပင်ကိုအခြေခံပြီးတဦးတည်းရှိနိုင်တယ်လို့. ဘယ်ဟာကိုသင်ရွေးချယ်တဦးတည်း, သငျသညျဂျာမဏီ၏ဝိညာဉ်ကျလာသောလိမ့်မယ်တဲ့လူကြိုက်များတဲ့ဒေသခံသောက်ရှိခြင်းလိမ့်မည်. ဒေသခံတွေကြီးမားတဲ့ပြီးနောက် Schnaps ရှိခြင်းကိုချစ်, မိုးသည်းထန်စွာမုန့်ညက်, ၎င်း၏အစွမ်းသတ္တိကိုအစာခြေနှင့်အတူကူညီပေးသည်ဘယ်မှာ. ဒါကြောင့် သငျသညျဂျာမနီမှာဖြစ်သည့်အခါ, စားသောက်ရန်အခမဲ့ခံစားရနှင့်တက်မသောက်ရ!
5. ဘယ်လ်ဂျီယံခုနှစ်တွင် Westvleteren Abbey အကောင်းဆုံးဒေသခံဘီယာ
ဘယ်လ်ဂျီယံဘီယာနှင့်အတူပြောရလျှင်, ဂျာမဏီထက်ဖြစ်ကောင်း ပို. ပင်. သို့သော်ရှိသမျှသောအံ့သြဖွယ်ဒေသခံအကြား ဘယ်လဂျီယံဘီယာ, သင်၏ခြေကိုချွတ်သင်သည်ခေါက်ပါလိမ့်မယ်တရှိ. Abbey ဘီယာ, ထို့အပြင် Trappists အဖြစ်လူသိများ, ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်အလွန်လူကြိုက်များ, ဒါပေမဲ့ Westvleteren Abbey ဘီယာ အဆိုပါရှားပါးဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်. အဲဒါကိုရဖို့, သင် Abbey ကနေကြိုတင်ယူထားရန်လိုအပ်ပါတယ် 60 ရှေ့ဆက်အချိန်ကာလ. သို့သျောလညျး, ကဒုက္ခကောင်းကောင်းရကျိုးနပ်သည်.
ဥရောပပူဇော်နိုင်ပါသည်အကောင်းဆုံးဒေသခံအချိုရည်ကိုခံစားဖို့အဆင်သင့်? သင့်ရဲ့အိတ်ထုပ်ပိုး, သင်၏အကြံအစည်အောင်, နှင့်မှတစ်ဦးကရထား Save ဦး စာအုပ်၏ရထားလက္မွတ္မ်ား တစ်ဖွဲ့လုံးကွဲပြားခြားနားသောအလငျး၌ဥရောပကြည့်ဖို့!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 ဥရောပတိုက်တွင်ကြိုးစားပါမှအကောင်းဆုံးဒေသခံအချိုရည်” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-local-drinks-europe%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#အချိုရည် #traveleurope အီတလီ လန်ဒန် travelbelgium travelfrance travelgermany traveltips